Qodista Shiinaha waxay xoojineysaa soosaarayaasha baaldiga dhulka iyo alaableyda | MINYAN
Excavator wuxuu xoojiyaa baaldiga dhulka lagu sameeyo wuxuuna leeyahay taarikada hoose ee dhumucda iyo dhinaca, wuxuu hagaajiyaa iska caabbinta duugga ah wuxuuna leeyahay waqti adeeg ka dheer baaldiga dhulgariirka. Kani waa qaabka baaldiga qodista ee ugu caansan. Xulasho “khadka dhexe” wanaagsan, ama barta bilowga ah, marka xaaladaha dalabyada aan si fiican loo aqoon.
Saamayn ballaaran iyo xaalado abrasion ah oo ay ku jiraan wasakh isku dhafan, dhoobo iyo dhagax. Tusaale: Qodista xaaladaha halka Penetration Plus tip noloshu u dhaxeyso 400 ilaa 800 saacadood.
qodista xoojinta baaldiyoda dhulka lagu sameeyo waxaa lagula talinayaa jeexjeexa shaqada yutiilitida, iyo qandaraaslaha guud ee ka shaqeeya xaalado kala duwan oo kala duwan. Taarikada hoose ee ka sii dhumuc weyn leh iyo dhinacyadu waa ka xiran yihiin baaldiyo Guud ee Waajibaadka loogu talagalay adkeysi badan Adapters iyo tilmaamaha baaldiyo ayaa loo qiyaasay waxqabadka iyo cimri dhererka. Dhinacyada ayaa horay loogu qoday jarayaal dhinaca ikhtiyaariga ah, iyo marar badan, ilaaliyayaasha dhinaca.
Kartida BixintaKartida Bixinta:300 Piece / Cadad bishiiba baaldi qodaya
Baakad & GaarsiinFaahfaahinta Baakadahasariirta alwaaxDekeddaQingdao / ShanghaiWaqtiga Lead:
Tirada (Cadad) 1 - 5 6 - 10 11 - 20 > 20
Est. Waqti (maalmo) 15 20 30 In lagu gorgortamo
Xuzhou Minyan Import & Export Co., Ltd waa soo saare hormuud u ah lifaaqyada qodista ee Shiinaha. Dhammaan alaabooyinka 'tayada' ayaa si adag loo xakameynayaa laga bilaabo ka shaqeynta illaa keenista. By hal-abuurnimo joogto ah iyo horumar, shirkadda ayaa heshay ISO 9001, shahaadooyinka CE iyo shatiyadaha farsamada si isdaba joog ah. Wax soo saarkayaga waxaa loo iibiyey macaamiil ballaaran oo gudaha iyo dibedda ah iyo iskaashi muddo dheer ah ayaa la soo saaray Hadafkeenu waa: Tayada marka hore, Adeeggu waa kan ugu horreeya, iyo wax soosaarka ugu muhiimsan Ballan-qaad la'aanta tayada sare leh iyo adeegga fekerka leh waxay naga dhigeysaa sumcad wanaagsan iyo la-hawlgalayaal badan oo imanaya. Waxaananu sii wadi doonaa hagaajinta wax soo saarka si aan ugu adeegno suuqa adduunka. Waxaan sugeynaa inaan kula shaqeyno!
Baaldi this waxaa loogu talagalay leh biin gashan patcess a si ay u bixiyaan qodidda ugu badnaanwaxqabadka iyadoo la ilaalinayo midnimada iyo ku habboonaanta lammaanaha. Raadiyaha gacanku waahoos u dhacday oo u oggolaanaysa ilaa 10% hagaajinta xoogga jabitaanka marka la barbar dhigo apin caadiga ah ee baaldi iyo coupler isku darka.Baaldiyo Waxqabadka Pin Grabber ayaa loo heli karaa 315-349 qodista, Guud ahaanUjeedo iyo cimri dherer daran
Waxqabadka Qabashada Pin
Awoodda baaldiyo waxaa loogu adeegsan karaa codsiyada halista ah halkaas oo xoog jabinta iyo xilliyada wareeggawaa muhiim - iyo in loo isticmaalo waxyaabaha sida wasakhda iyo dhagaxa isku dhafan ee isku dhafan. (MayaWaxaa loogu talinayaa dhoobada.) Xoog jabka waxaa la kordhiyay sababtoo ah hoos u dhaca gacantiisa iyofaafay pin pin. Waqtiyada wareegga mashiinka inta badan qalabka ayaa lagu hagaajiyay heer ahaanbaaldi ku jira codsi la mid ah.Baaldiyadaha Awoodda Waajibaadka culus ayaa diyaar u ah 320-336 qod
Baaldiyo Awood Sare leh ayaa loogu talagalay loona dhisay si loogu isticmaalo rarka xamuulka ee wax soo saarka sarecodsiyada. Iyada oo la adeegsado codsi habboon oo la dejiyo, baaldiyokan ayaa dhaqaajin doona waxyaabo badanxaddiga ugu yar ee marinnada - kordhinta wax soo saarka.Baaldiyo Awood Sare leh ayaa loo heli karaa qodidda 336-390, Joogtaynta Joogtada Guud.
Hore: qashin qubka
Xiga: ilig baaldi qodaya
Baaskiilka Dhagaxa 'Excavator Rock Screening'